Nampianatra ny Olona mba Hamela Heloka i Jesosy | Fiainan’i Jesosy
HATRAMIN’NY IMPITO VE NO HAMELA HELOKA?
FANOHARANA MOMBA ILAY MPANOMPO TSY NAMINDRA FO
Ren’i Petera ilay torohevitr’i Jesosy hoe mila alamina mitokana ny olana eo amin’ny samy rahalahy. Toa tiany ho fantatra anefa hoe impiry izy no mila miezaka manao izany.
Hoy i Petera: “Tompoko, raha manota amiko impiry ny rahalahiko no havelako ny helony? Hatramin’ny impito ve?” Nisy mpitondra fivavahana nampianatra fa tokony ho intelo ihany no mamela heloka. Nety ho nihevitra àry i Petera fa efa tena tsara fanahy izy raha mamela heloka “hatramin’ny impito.”—Matio 18:21.
Mifanohitra amin’ny fampianaran’i Jesosy anefa ny manisa fahadisoana. Nanitsy an’i Petera àry izy ka niteny hoe: “Tsy hilaza aminao aho hoe hatramin’ny impito, fa hatramin’ny impito amby fitopolo.” (Matio 18:22) Tsy misy fetrany no dikan’izany. Tsy tokony hasian’i Petera fetrany àry ny famelany ny heloky ny rahalahiny.
Nilaza fanoharana i Jesosy avy eo mba hampisehoana tamin’i Petera sy ny hafa fa tsy maintsy mamela heloka izy ireo. Momba ny mpanompo iray izy io. Namindra fo taminy ny mpanjaka tompony nefa tsy nanahaka azy izy. Te hanao ampamoaka an’ireo mpanompony momba ny trosan’izy ireo ilay mpanjaka. Nentina teo aminy ny mpanompo iray nananany trosa be mitentina talenta 10 000 (60 000 000 denaria). Tsy ho voaloany mihitsy io vola io, ka nasain’ilay mpanjaka namidy izy sy ny vady aman-janany mba handoavana ny trosany. Niankohoka teo anatrehany àry ilay mpanompo ka niteny hoe: “Mahareta re fa haloako avokoa ny volanao rehetra e!”—Matio 18:26.
Nangoraka azy ilay mpanjaka ka namindra fo taminy ary nahafoy an’ilay trosa be. Nitady ny mpanompo namany, izay nananany denaria 100, anefa ilay mpanompo avy eo. Nisambotra azy izy, nanakenda azy, ary niteny hoe: “Aloavy ny volako rehetra any aminao.” Niankohoka teo anatrehany ilay mpanompo namany sady niangavy hoe: “Mahareta re fa haloako ny volanao e!” (Matio 18:28, 29) Tsy mba nanahaka an’ilay mpanjaka izay namela ny trosany anefa izy. Kely noho ny azy ny trosan’ilay namany, nefa nogadrainy izy io mandra-pandoany ny volany.
Nisy mpanompo hafa nahita ny haratsiam-panahin’ilay mpanompo, ka nitantara izany tamin’ny mpanjaka. Tezitra ny mpanjaka ka nampiantso an’ilay mpanompo. Hoy izy taminy: “Ry mpanompo ratsy fanahy, nafoiko ny trosa rehetra tany aminao, noho ny fiangavianao. Tsy mba tokony hamindra fo amin’ny mpanompo namanao koa ve ianao, toy ny namindrako fo taminao?” Nanolotra azy tamin’ny mpiambina ny fonja àry ilay mpanjaka, mandra-pandoany ny trosany rehetra. Namarana ny teniny i Jesosy hoe: “Toy izany koa no hataon’ny Raiko any an-danitra aminareo, raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin’ny fonareo avy ianareo.”—Matio 18:32-35.
Mampianatra antsika hamela heloka tokoa izany! Mpanota isika ka toy ny hoe mahafoy trosa be amintsika Andriamanitra. Kely izay fahadisoana rehetra ataon’ny Kristianina hafa amintsika, raha oharina amin’izany. Tsy indray mandeha anefa i Jehovah no mamela antsika fa imbetsaka! Tsy tokony hamela ny rahalahintsika imbetsaka àry ve isika, na dia manana antony hitarainana aza? Nampianarin’i Jesosy tao amin’ny Toriteny teo An-tendrombohitra fa ‘hamela ny helotsika’ Andriamanitra, ‘tahaka ny amelantsika an’izay meloka tamintsika.’—Matio 6:12.
Inona no nahatonga an’i Petera hanontany momba ny famelan-keloka? Nahoana izy no nety ho nihevitra fa efa tena tsara fanahy raha mamela heloka impito?
Inona no nataon’ilay mpanjaka rehefa nitalaho famindram-po taminy ilay mpanompo? Inona anefa no nataon’io mpanompo io tamin’ny mpanompo namany?
Inona no ianarantsika avy amin’ilay fanoharan’i Jesosy?
Hizara Hizara Ilaina ny Mamela Heloka